Rose of Sharon: March 2012
red bean အထုတ်
မန္တလေးပဲကြော် ကြော်ဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ မနော်ကနေစပါတယ်… March လ ၂၂ရက်မနက်က မနော်က Facebook ပေါ်က AaB page မှာ Breakfast Tray လေးလာတင်တယ်… အဲဒီထဲက မန္တလေးပဲကြော်က ကိုယ်သိပ်ကြိုက်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်မလုပ်ဖြစ်လို့ မလုပ်တတ်တော့တဲ့ မုန့်ဖြစ်နေတယ်… အဲဒီအကြောင်းလေး ကော်မန့်ရေးမိတော့ မသက်ဝေက သူကြော်ခဲ့တဲ့ မန္တလေး ပဲကြော်ပုံလေး ကျမဆီ tag ပေးပြီး လုပ်ရတာလွယ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်… ကျမက အဲဒီပဲမျိုးရှာဝယ်ဖူးတယ်… ဒီမှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ အမသက်ဝေက ဂူဂယ်ကနေ ပုံနဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးပါပြပါတယ်…. ညီမ ဗစ်နဲ့ ညီမသန္တာ တို့ကလဲ အဲဒီ red bean မရရင် kidney bean နဲ့လုပ်လို့ရကြောင်း ပြောပြကြပါတယ်… မနော်ကလဲ အိန္ဒိယန်းဆိုင်တွေမှာရနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်… March လ ၂၆ရက်နေ့မှာ မချစ် ကလဲ မန္တလေးပဲကြော် ကြော်ပြီး facebook မှာတင်ပါတယ်… ဒါနဲ့ကိုယ်လဲ ရောဂါတခုရသွားသလို မရရအောင် ကြော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ခလေးတွေကျောင်းသွားချိန် စူပါမားကတ်တကာပတ်ရှာပါတော့တယ်…
ကိုယ်ရောက်ခါစက ကြိုးစားရှာပေမဲ့ မတွေ့လို့လက်လျှော့ထားတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီထင်ရဲ့… အခုထရှာတော့ စူပါမားကတ်တိုင်းမှာရှိနေပြီ… အရင်က ပြည်ပဘဲပို့ကြလို့ရှာမရတာလားတွေးမိတယ်… အခုတော့ အဆင်သင့်တွေ့ပြီမို့ ဒီမနက်ဘဲအကောင်းအထည်ဖေါ်လိုက်ပါတယ်… ချက်နည်းကို မဆွိဆီကယူပါတယ်…
Red bean ကိုတစ်ညရေစိမ်ထားပြီး မနက်ကျတော့ microwave ထဲမှာနာရီဝက်ထည့်ပေါင်းပါတယ်... ကြက်သွန်ဖြူရှစ်မွှာနဲ့ ချင်းတတက်ကို ညက်နေအောင်ထောင်းပါတယ်... ပေါင်းပြီးသားပဲကို Blander နဲ့ခြေပါတယ်... ခြေပြီးသားပဲ(80 gram)တွေကို ကောက်ညှင်းမှုန့် (40 gram), ဆား (1 teaspoon), ဆားဆိုဒါ( 1 teaspoon), ထောင်းပြီးသားကြက်သွန်ဖြူ၊ချင်းတွေနဲ့ နယ်လို့ရရုံရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဇလုံထဲမှာနယ်ပါတယ်... နယ်ပြီးတော့ နာရီဝက်လောက်နှပ်ထားလိုက်ပြီးမှ မီးနဲနဲနဲ့ကြော်ပါတယ်...
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြော်ပြီး စားကြည့်တော့စားကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း… မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး international standard အကြော်ဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်ရင်စီးပွါးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ရဲ့…
Posted by rose of sharon at 11:27 AM 16 comments:
သားလေးဒီနေ့၆နှစ်ပြည့်ပါတယ်... သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတန်းထဲမှာ မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးဖို့ ပူဆာထားတာနဲ့ မနက်ဘက်ကျောင်းသွားပို့ထဲက မွေးနေ့ကိတ်ရယ်... သူ့အတန်းဖော်တွေကိုဝေပေးဘို့ လက်ဆောင်အိတ်လေးတွေရယ်... သူ့ဆရာမကိုပေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဘို့ ကင်မရာပါပေးထားခဲ့ပါတယ်... အခုတင်ထားတဲ့ပုံတွေက သူ့ဆရာမရိုက်ပေးထားတာပါ...
အိမ်မှာတော့ မနက်ပိုင်း မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ဟင်းတစ်ချို့ချက်ပြီး နေ့လည်ဘက်အားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ပါတယ်... ညဘက်မှာတော့ မိသားစုဝင်တွေဘဲ သက်သက် မွေးနေ့ပွဲလေးထပ်လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်... အိန္ဒိယန်းဆိုင်က ကုလားစာမှာစားကြပါတယ်... သားလေးကတော့ကျေနပ်စွာပျော်ရွှင်နေလေရဲ့...
Posted by rose of sharon at 6:24 PM 14 comments:
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့မှာ မြန်မာအစားအသောက်အချို့ပါ မှာယူစားသောက်နိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့က Monsoon ရဲ့ဆိုင်ခွဲဖြစ်ပါတယ်… ဗီယက်နမ်မှာ ပထမဆုံးမြန်မာအစားအသောက်ရတဲ့ ဆိုင်မို့ ဟိုချီမင်းမြို့မှာနေတဲ့ မြန်မာတွေ ခဏခဏသွားအားပေးကြပါတယ်… Menu ထဲမှာ ဟင်းအမယ်သိပ်မများပေမဲ့ မြန်မာအစားအသောက်နဲ့ ဝေးနေရသူတွေအတွက်တော့ အလွမ်းပြေစေပါတယ်…
ကျမတို့လို မြန်မာအမျိုးသမီးအိမ်ရှင်မတွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာချက်စားနေကျမို့ မြန်မာအစားအသောက်ကို လွမ်းလို့သွားစားဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာအစားသောက်ရောင်းချခြင်းကို ကျေနပ်သဘောကျစိတ်သက်သက်နဲ့ သွားရောက်အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်... ဗီယက်နမ်မှာနေသူမြန်မာမိတ်ဆွေများ၊ ဗီယက်နမ်ကို လာလည်ဘို့ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဝေငှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
No.1 , Cao Ba Nha , Nguyen Cu Trinh ,
District 1 , Ho Chi Minh City , Vietnam.
Tel: +848 6290 8899
Posted by rose of sharon at 4:41 PM 11 comments:
Posted by rose of sharon at 7:54 AM 17 comments: